War Cusub: NATO oo sheegtay in ay Joojisay Howlgalkii Ciidankooda ay ka Wadeen Biyaha Soomaliya Ee lagaula dagaalamayay Burcad Badeeda | Kismaayo24 News Agency
War Cusub: NATO oo sheegtay in ay Joojisay Howlgalkii Ciidankooda ay ka Wadeen Biyaha Soomaliya Ee lagaula dagaalamayay Burcad Badeeda
Thursday November 24, 2016 - 4:15 under Somali News by Tifaftiraha K24
Ururka gaashaanbuurta NATO ayaa ku dhawaaqay inay joojiyeen hawlgalkii ay ciidamadooda bada ka wadeen biyaha Sooomaaliya ee ay kula dagaalamayeen burcad badeeda Soomaaliyeed.
Afhayeen u hadlay NATO oo la yiraahdo Dylan White ayaa sheegay in inta badan ciidamadooda ay kala baxeen biyaha Soomaaliya joojiyeena howlgalkii ka dhanka burcad badeeda Soomaalida waxaana uu u sababeeyay inay hadda wax burcad badeed ah ka jirin xeebaha Soomaaliya.
Afhayeenkaan waxaa uu sheegay in shaqada ugu badan ay hadda u wareejinayaan dhanka badda Mediterranean,ka si ay u bad baadiyaan tahriibayaasha ku baaba’a badda ugana hor tagaan dadka dadka tahriibaya sida uu yiri.
Sidoo kale sargaalkaan u hadlay gaashaanbuurta NATO waxaa uu xaqiijiyay ininta badan ciidamadooda iyo maraakiibtooda dagaalka ka dhaqaaqeen badweynta Hindiya iyo biyaha Soomaaliya ku teedsan waxaana uu sidoo kale sheegay inay kor kala socon doonaan dhaq dhaqaaqyada ka jira xeebaha Soomaaliya.
Dylan White waxaa uu aaminsanyahay in howlgalada wadajirka ah ee ay sameeyeen ciidamada NATO, kuwa Midawga Yurub, iyo ciidamo ka socda dawlado kala duwan inay sababtay inay dhamaadaan weeraradii burcad badeedu ka geysan jireen biyaha Soomaaliya ee ay maraakiibta ku qafaalan jireen.
Ciidamadda badda gaashaanbuurta NATO oo xeebaha Soomaaliya joogay tan iyo sanadkii 2009 waxay sheegeen inay burcad badeeda Soomaalida ka bad baadsheen Sodomeeyo maraakiib oo mararay meelo ka baxsan biyaha Soomaaliya.